Kumba Kwekunze Kunovhenekerwa Kunze - Galveston County Chikafu Bhangi
Vashandi & Utungamiriri
Kwevana Kwehutano Kunovhenekwa
Kumba Kunopararira Kutaurirana
Dzidzo Yezvokudya zvinovaka muviri
Tsvaga Rubatsiro rweKudya
GADZIRA CHikafu / FUNDI DZIDZA
Kudya neFund Drives
Iyo Haunted Warehouse
Goverana Mahoridhe Ako
BATSIRAI FUNDI MAZUVA ANO
DZIMWE NZIRA DZOKUPA NZIRA
Vanhu vakaremara uye vakuru vakuru ndivo vanhu vedu vanotambura zvakanyanya. Chirongwa cheGalveston County Food Bank's Homebound Nutritional Outreach chirongwa chinobatsira vanhu vanotarisana nekushomeka kwechikafu uye vakasungirirwa kudzimba dzavo nekuda kwehurema kana nyaya dzehutano. Chirongwa chedu chekuendesa kumba chinounza chikafu chinodiwa kuvanhu ava vangadai vasina.
Ndezvipi zvinodiwa zvekukodzera?
Vanhu vanofanirwa kunge vaine makore makumi matanhatu ekuberekwa kana kupfuura kana vakaremara, vanosangana nemitero yeEFAP yemari, vanogara kuGalveston County, vasingakwanise kuwana nzvimbo yekushambadzira kana nharembozha kuti vagamuchire chikafu.
Kakawanda sei munhu akakodzera anogamuchira chikafu?
Bhokisi rezvikafu rinounzwa kamwe chete pamwedzi.
Ndingaite sei kuti ndizvipire pachirongwa ichi?
Bata Kelly Boyer neemail kelly@galvestoncountyfoodbank.org kana nefoni 409-945-4232 kuti ugamuchire pasuru yekuzvipira packet.
Chii chine bhokisi rezvikafu?
Bhokisi rega rega rine makirogiramu makumi maviri neshanu ezvekudya zvisingaori senge rakaoma mupunga, pasita yakaoma, miriwo yemumagaba, michero yemumagaba, mashupu emumagaba kana stew, oatmeal, cereal, shefu mukaka wakagadzikana, shefu rakagadzikana muto.
Ndiani anoendesa mabhokisi echikafu?
Mabhokisi echikafu anoendeswa kune vanhu vanokodzera nevanozvipira. Wese munhu anozvipira anoongororwa uye anofanirwa kujekesa cheki yekutora chikamu muchirongwa ichi mukuedza kuona kuchengetedzeka kwevanogashira.
Ini ndinoita sei kunyorera chirongwa chekumba?
Ndokumbirawo upedze iyo yekumba yekushandisa paketi uye uteedzere rairo iri papeji 2.
Dhawunirodha Yepamba Inowanikwa Nutritional Outreach Chikumbiro Paketi
624 4th Ave N., Texas Guta, 77590
9am - 3pm (Chipiri-China); 9am - 12pm (Chishanu)
Bhizinesi Kushanda Bldg:
Maawa Ehofisi: 8am - 4pm (Muvhuro-Chishanu)
213 6th Street N., Texas Guta, 77590
Dzvanya apa kuti uwane E-mail Sarudzo
Iyo Galveston County Chikafu Bhangi yakanyoreswa se501 (c) (3) isingabatsiri sangano Mipiro inobvisirwa mutero kune iyo inobvumidzwa nemutemo. Iyo Galveston County Chikafu Bhangi inotenda mukuitisa bhizinesi nekuvimbika kwakanyanya uye kuvimbika. Lighthouse Services inobvumidza iyo Galveston County Chikafu Bhangi kusimudzira aya maitiro nekuita sechishandiso chenhengo dzemunharaunda, kusanganisira veFood Bank vashandi, kuendesa zvakavanzika mishumo, mazano, kana zvichemo kune wechitatu bato uyo anobatsira iyo Galveston County Chikafu cheKudya manejimendi kugadzirisa nyaya vachiri kuchengetedza hunyanzvi zviyero. Iri sangano mukana wakaenzana mupi.
Ndokumbirawo ubaye pano kuti uverenge iyo Donor Policy.
Copyright © 2021 Galveston County Chikafu Bhangi - Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Powered by Get Social!